I-Best Emulator ye-PC ye-PC (2020) - Landa Windows 10 - Ama-Softwares
Ufuna i-emulators ye-iOS yedeskithophu? Ungamisa ukuzingela kwakho lapha njengoba sinomhlane wakho. Kule ndatshana, sibhale ama-emulators aphezulu we-10 we-iOS angasetshenziswa kalula kudeskithophu. Ngenkathi sisebenzise ngamunye futhi sicabanga, lolu hlu lungasiza kakhulu, sizigcina sivulekele noma yisiphi isiphakamiso ongahle ube naso.
Uma ungumsebenzisi we-iPad noma we-iPhone, ungakuthola kunzima ukwabelana ngamafayela noma ukusebenzisa izinhlelo ze-iOS kwi-Windows PC yakho. Ngezansi kunikezwe amanye ama-emulators aphezulu we-iOS, azokusiza ukuthi usebenzise izinhlelo zakho zokusebenza ze-iOS kukhompyutha ye-Windows. Ama-emulators e-iOS akha i-ecosystem ye-iOS kwikhompyutha ye-Windows, ngaleyo ndlela enza lula ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza ze-iOS kwiWindows PC yakho.
Ezinye izindlela zeCamScanner
Uhlu Lwama-Emulators ahamba phambili we-iOS Windows 10:
Ake sibheke labo esibahlolile sabathola bekufanele ukuzama-
Indiza Yokuhlola yeXamarin
Ugesi Mobile Studio
1. I-SmartFace Emulator
Enye yama-emulators we-iOS angcono kakhulu, i-SmartFace, kulula kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa. Kuyindlela ethandwayo phakathi kwabasebenzisi uma kukhulunywa nge-emulators ye-iOS. Le emulator inezinguqulo ezimbili - eyodwa inguqulo yamahhala, enye iyona yokuqala. Futhi, inikeza izici ezithile eziyingqayizivele neziphephile kubasebenzisi.
Uma ufuna ukufuna uhlobo lwe-premium, udinga ukukhokha u- $ 99. Zizwe ukhululekile ukukhetha uhlelo ngokuya ngesidingo sakho kanye nesabelomali sakho. Sizokweluleka ukuthi uqale ngokulanda inguqulo yamahhala futhi uzame. Ngemuva kwalokho ungaqhubekisela kunguqulo ekhokhelwayo uma ufuna.
Lokhu futhi kuyisidumi se-iOS esidumile seWindows PC. Le emulator inika amandla abasebenzisi ukusebenzisa i-Apple apps ku-Windows PC yabo. Futhi, le emulator inesitolo sayo sohlelo lokusebenza.
Ngaphakathi kwesitolo sohlelo lokusebenza, abasebenzisi bangahlola kalula izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni.
Lokhu kuze kube yimanje enye indlela engcono yokuthola i-App.io emulator. Iza nokusebenziseka okulula, okusebenziseka kalula komsebenzisi. Futhi, inikeza isici sokulondolozwa kwamafu. Imizuzu yokuqala engama-90 yokusetshenziswa ingeyamahhala ngokuphelele.
Lapho-ke uma ufuna ukusebenzisa i-emulator ngokuqhubekayo, kuzofanele uthenge uhlobo lwe-premium.
4. I-Xamarin Test Flight
Lesi yi-emulator ye-iOS esemthethweni ephethwe yi-Apple. Iza ilayishwe kuqala ngezici ezibanzi. Zonke lezi zici ziba wusizo olukhulu ekuhlolweni nasekusebenziseni izinhlelo zokusebenza ze-iOS kukhompyutha ye-Windows. I-emulator nayo inikezela ngobuningi bokusekelwa komsebenzisi.
Kuzothatha isikhashana ukujwayela le emulator.
Lesi isikhombi se-iOS esuselwe kusiphequluli se-Chrome. Kuyasiza ekubonelweni ngempumelelo kwezinhlobo ezahlukahlukene zesoftware ye-iOS. Iza nezici ezithile ezikhethekile ongeke uzithole kalula kunoma iyiphi enye i-emulator ye-iOS. Kuyasiza kakhulu ekwakheni nasekuhloleni izinhlelo zokusebenza ze-iOS kwi-Windows PC yakho.
Iza nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esilula. Isebenza kahle ekulingiseni izinhlelo zokusebenza ze-iOS kwi-Windows PC yakho.
Okulandelayo kuhlu lwethu kungenye iMobione StudiOS ethandwayo. Yize lesi emulator singatholi ukuvuselelwa konjiniyela nokho sisebenza ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, lena isekela onjiniyela abangahle badinge ukudala izinhlelo zokusebenza zesigaba esiphakeme samadivayisi weselula.
7. I-Air yomoya
Uma wazi ngohlelo lwe-Adobe Air, i-Air iPhone ingakhetha kahle kakhulu. Lokhu Emulator kuyintofuthi kuncikeohlelweni olufanayo. Into enhle ngalena ukuthi kulula ukuyisebenzisa. Ungavele ulande futhi usebenzise izinhlelo ze-iOS. Yebo! Yilokho kuphela.
8. I-Electric Mobile Studio
Lokhu kuvame ukusetshenziswa ngochwepheshe bezinhlelo zokusebenza ze-iPhone ne-iPad. Ungasebenzisa inguqulo yokuqala mahhala ngenkathi inguqulo ephelele iza ngezindleko ezingama-40 $. Uma ufuna enye indlela ehloniphekile ngesikhathi sokuzingela kwakho ama-emulator we-iOS we-PC, ungakhipha le mali ngaphandle kokungabaza. Kithina, sithole ukuthi ulwazi lomsebenzisi lubushelelezi ngokukhethekile.
I-Wave ingenye i-emulator ye-iOS ekhethwe abalandeli. Le isetshenziswa futhi ngonjiniyela ikakhulukazi ngezinhloso zokuhlola. Uma kuqhathaniswa namanye ama-emulators we-iOS atholakalayo lokhu kuza nobubanzi obuhle bezinto ezinhle kakhulu. Kuyathakazelisa ukuthi awudingi ukulanda le-emulator. Ungamane uyifake futhi uyethule.
10. Isivivinyo se-Testflight
I-Testflight isetshenziswa kakhulu ngonjiniyela ekuhloleni izinhlelo zokusebenza ze-beta ezifakwe amakhodi kusetshenziswa i-Xamarin. Kuyathakazelisa ukuthi ibilokhu ithandwa kakhulu phakathi kwabathuthukisi be-iOS ngezizathu eziningi kufaka phakathi ukutholakala kwayo mahhala, ukusebenza okubushelelezi, nokusebenziseka kalula.
Okulandelayo kuhlu lwethu yi-emulator enhle yabadlali bamageyimu. Ixhaswa ukubuyekezwa okuhle kokusebenzisa imidlalo ehlukahlukene ye-iOS ngokushelela. Akuthathwa njengokuhamba phambili kepha ungahle uthande ukuzama.
Siyigcine ekugcineni ohlwini lwethu. Ngesizathu esilula esingakutholi kulula ukusetha nokusebenzisa. Uma usaqala, singaphakamisa ukuthi uphume kulena. Kodwa-ke, uma ubungumpetha ngokusebenzisa ama-emulators, ungahle ungakutholi kunzima nakho.
Noma ilusizo kangakanani i-emulator, ingahlupha ezinye izinhlelo zokusebenza kusistimu yakho. Lokho kungenxa yokuthi idla ukusetshenziswa okukhulu kwe-RAM. Lokhu kulandelwa ukuphazamiseka ekudlaleni imidlalo esezingeni eliphezulu. Ngakho-ke, sincoma ukuthi usebenzise i-Advanced System Optimizer, esebenza njenge-booster game futhi ikhahlele ukusebenza kohlelo. Ngokwengeziwe, isebenza njengesivikeli sesistimu ne-disk optimizer.
Sithemba ukuthi lolu hlu lwama-emulators we-iOS lusiza ukuthi udlale imidlalo futhi usebenzise izinhlelo ze-iOS kwideskithophu. Ngenkathi iningi lala ma-emulators limahhala, amanye eza ngezindleko kepha kufanele ukuzama. Yabelana ngolwazi lwakho futhi usazise nganoma yisiphi i-emulator enhle owaziyo ukuthi ingaba wusizo kwabanye. Singathanda ukuvuselela le ndatshana njengokusho kweziphakamiso zakho.
i-youtube bukela ama-movie wamahhala online
Ngilulanda kanjani uhlelo lokusebenza lwe-alexa kwikhompyutha yami?
ungayihlola kanjani i-dm yakho ku-instagram kwikhompyutha
I-xbox 360 engasetshenziswanga amakhodi wokusebenzisa